एकाएक किन आए अमेरिकी आर्मी काठमाण्डौमा ? - Hamro Abhiyan
एकाएक किन आए अमेरिकी आर्मी काठमाण्डौमा ?
काठमाडौं। सहरी वि द्रोह सामना गर्ने विषयमा नेपाल र अमेरिकी सेनाबीच सैन्य अभ्यास हुने भएको छ। संभावित सहरी वि द्रोह र त्यसले उत्पन्न गराउन सक्ने चु’नौतिका विषयमा नेपाल र अमेरिकी सेनाका विशेष फौजबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने भएको हो।
आगामी फागुन ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने सैन्य अभ्यासमा (तालिम) नेपाली र अमेरिकी सेनाका विशेष फौज सहभागी हुँदै छन्। ‘ब्यालेन्स नेल’ नाम दिइएको सैन्य अभ्यास छाउनीस्थित महावीर गण (रेञ्जर)मा हुनेछ। उक्त सैन्य अभ्यासमा अमेरिकी सेनाका ९ जना र नेपाली सेनाका ३६ जना विशेष फौज सहभागी हुने सैनिक स्रोतले जनाएको छ। सहरी विद्रोहका अलाबा यो सैन्य अभ्यासमा मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय का’नुन, ल’डाइमा घा’इतेको उपचारपद्धतिलगायत विषयमा सै’द्धान्तिक अनुभवको आदन प्रदान हुनेछ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
विभिन्न विषयका प्रशिक्षकसहित अमेरिकी विशेष फौज फागुन पहिलो साता काठमाडौं आउने छन्। नेपाल र अमेरिकी सेनाबीचका विशेष फौजबीच विभिन्न विषय केन्द्रित सैन्य अभ्यासहरू विगत लामो समयदेखि हुँदै आइरहेको छ। नेपाली र अमेरिकी सेनाबीचको सैन्य अभ्यासले सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र विशेष अनुभवको आदान प्रदान गर्न सहयोग गर्ने छ।
नेपाली सेनाको अन्य सैनिक संगठनसँग सहकार्य गरी सैनिक का’रवाही सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा समेत अभिवृद्धि गर्न विशेष सहयोग पुग्ने छ। संयुक्त तालिम÷अभ्यासबाट दुई देश बीचको मैत्रीपूर्ण पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ एवं सौहार्द बनाउन सहयोग पुग्ने नेपाली सेनाले बताउँदै आएको छ।